Wasiir Maareeye oo la kulmay Wasiirka Gaadiidka iyo Isgaarsiinta ee Qadar - Halbeeg News
Wasiir Maareeye oo la kulmay Wasiirka Gaadiidka iyo Isgaarsiinta ee Qadar
DOOXA (HALBEEG) – Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ee Soomaaliya Maxamad Cabdi Xayir Maareeye oo socdaal shaqo ku jooga dalka Qadar, ayaa la kulmay Jaasim Seyf Axmad Al suleyti oo ah Wasiirka Gaadiidka iyo Isgaarsiinta ee Qadar.
Labada mas’uul ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac iyo sidii Dowladda Qadar u taageeri lahayd dadaalka dib u soo kabashada ee ay Soomaliya xilligan waddo.
Dowladda Qadar ayaa mar sii horreysey shaacisay in ay Dowladda Soomaaliya ka taageeri doonto horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha, iyadoo ballan qaadday in ay bixin doonto kharajka ku baxaya dayactirka waddooyinka soo gala Muqdisho ee ka yimaada dhanka magaalooyinka Jowhar iyo Balcad.
Sidii kale, Dowladda Qadar ayaa ballan qaadday inay gacan ka geysan doonto dayactirka iyo dhismaha dekeddo dhowr ah oo ay kamid tahay dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug.
Wasiir Xayir ayaa qayb ka ahaa wafdi uu hoggaaminayey Madaxweynaha Soomaaliya Maxamad Cabdullaahi Farmaajo, kuwaasoo toddobaadkii hore magaalada Beijing ee dalka Shiinaha kaga soo qayb galay shirkii toddobaad ee Golaha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika.
Booqashada Wasiirka Ganacsiga ee Soomaaliya ku joogo Qadar, waxay kusoo aadeysa xilli Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ku hawlan tahay horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga, si dakhliga dowladdu u kobco bulshadana loo gaarsiiyo adeegyada ay u baahan yihiin.
SUDAN: Al bashiir oo kala diray golihiisii wasiirrada
Kenya oo ka walaacsan askaraynta Alshabaab ka waddo gobollada waqooyiga